သောသီခို: ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဘာတေးလ် လင့်တ်နာ ဝေဖန်
ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲတွင် တွေ့ရသော ဘာတေးလ် လင့်တ်နာ (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
Posted by PKD at 2:57 AM
Why nobody want to say something about Burma? Are they control by the Pro-Democracy Government by any different ways? Do you all believe all things will result in the positive ways in the future or are you surrender to...?
Please suggest something what you think!
ရခိုင်ပြည် အမျိူးသားကောင်စီ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
စာရင်းစစ်ဆရာမများ သန်းခေါင်စာရင်းဇယား ပြန်လည်ပြုစု...
KNU ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီ အရေးပေါ် အစည်း အဝေးမှ NCCT...
အိမ်နဲ့ ခြံမြေတွေကို ဗမာစစ်တပ်က သိမ်းသွားတဲ့ နေ့ တ...
ကေအဲန်ယူ - ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ဗဟိုအမြဲတမ်းကေ...
၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရ တိုင်း အကြောင်း သုံး...
KNU ခေါင်းဆောင်များ၏ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး
Letter to Representative of UNFPA Myanmar regardin...
1990 ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ ဆုံပွဲသု...
သန်းခေါင်စာရင်း နဲ့ တိုင်းပြည်အသွင်သဏ္ဍာန်
"လူမျိူးစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးနိုင်ငံများ" ပေါ်ထွန်း...
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ အမေရိက...
အစိုးရတပ် ရိက္ခာပို့လမ်းကြောင်းအနီးရှိ ဒေသခံဖာလာခြံ...
The Tatmadaw's Divide-and-Rule Tactics in Myanmar
DVB - နိုင်ငံရေးအာမခံချက်မရှိပါက စီမံကိန်းတွေကို K...
ဟတ်ကြီးရေကာတာ စီမံကိန်းနေရာတွင် ရေကာတာဆန့်ကျင်ရေး ...
BURMA: SURRENDER TIMING
Our livelihoods have been Destroyed - ရွှေကျင် - ကေ...
KNU မှ ဗိုလ်ချူပ် စောရွှေဆိုင်း၏ အဆိုအမိန့် များ
Karen Worldwide Call for Burma’s Census to be Post...
စစ်အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ အပေ...
FBR Video Man Shot by Burma Army
သံလွင်မြစ်ပေါ်က ဟတ်ကြီးရေကာတာနှင့် KNU.
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ကန့် ကွက်ရမှာ ပြည်ထောင်စုသားတို...
DVB - အပစ်ရပ် မူကြမ်း အပြီးသတ်ရန် ၉ ဦးစီပါတဲ့ ကော်...
UNFC နဲ့ NCCT သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Comments on Recent STRATFOR Analyses of Myanmar / ...
အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေး ကြိုးပမ်းရန် လုံးဝမသင်...
၂၀၁၄ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ နှင့် KNU
STRATFOR: Myanmar Confronts Its Geography ရဲ့ဆောင်...
11 Counterpoints // STRATFOR: Myanmar Confronts It...
ပြည်တွင်းမှာ ပျံ့ကျဲနေတဲ့ ကရင်တွေအတွက် သန်းခေါင်စ...
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရောင်မဆိုးကြစေချင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ...
ပလောင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ပိုဖြစ်၊ ...
ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဌဟောင်း ဗိုလ်ချူပ်...
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးစောတာမလာဘော ချစ်ဇနီး နော်ဖေါကဝေါ်၏ ဈ...
တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို ကရင်တွေ အယောက်ပေါင်းဘယ်လောက်...